Shirkii wasiirada arrimaha debadda IGAD oo lasoo gebagebeeyey & wafdiga oo dalka ka dhoofay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shirkii halka maalin ahaa ee ay Muqdisho ku yeesheen wasiirada arrimaha debadda IGAD ayaa lasoo gebagebeeyey.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa soo xiray shirkaas oo sanadkan lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in shirkani fursad muhiim ah u yahay Soomaaliya oo markale dib usoo ceshatay sumacadii ay ku dhex lahayd bulshada caalamka gaar ahaan dalalka IGAD.
RW Cumar C/rashiid, ayaa ku tilmaamay Dowlada Soomaaliya in ay diiradda saarayso ka miro dhalinta hiigsiga 2016, waxa kastana loo kala horumarin doona sida ay u kala mudan yihiin oo ay ugu horreeyaan xoreynta iyo nabad kusoo dabaallidda dalka, Siyaasad xasilan oo ay ka qayb galaan qabaha kala duwan ee bulshada, hilidda daryeel caafimaad, waxabarasho iyo dhiirigalinta ganacsiga si uu sal dhig ugu noqdo hormarinta dhaqaalaha.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo shirka ka hadlay ayaa ku tilmaamay in shirkan uu yahay mid taariikh ah oo muujinaya horumarka laga gaaray ammaanka iyo siyaasada Soomaaliya.
War murtiyeedkan oo ka koobnaa dhowr iyo labaatan qodob ayaa looga hadlay horumarada laga sameeyay Soomaaliya, sida dhismaha Maamul KMG, ammaanka, magaabistii Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo bogaadin loo jeediyay waxyaabihii u qabsoomay dowladda Federaalka.
Wasiirka Arrimaha Dibada Itoobiya Dr. Tedros Adhanom oo ah Gudoomiyaha Golaha Wasiirada IGAD ayaa ugu dambeyn u akhriyay saxaafada war murtiyeedka laga soo saaray shirka, wuxuuna cadeeyay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumar, isla markaana IGAD ay garab taagan tahay.
Dr. Tedros Adhanom ayaa sheegay in shirkan lagu qabtay Soomaaliya markii u horeysay tan iyo bur burkii dowladdii dhexe, isagoo xusay in shirkan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay IGAD iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Arrimaha Dibada Itoobiya ayaa sheegay in IGAD ay xushmeyneyso u hayaan madax banaanida, qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Dhinaca kale Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD ayaa galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan cadde, kadib shir hal maalin ah, isla markaana ay xalay ku hoydeen magaalada Muqdisho.
Wadooyinkii xirnaa ayaa duyrba dib loo furay waxaana gancsiga iyo isu socodku kusoo noqday sidoo hore.